राहत, इसिडि, छुट करारलगायतका शिक्षकहरुका लागि पुनः आन्तरिक विज्ञापन हुनुपर्छ – EducationPati – A complete news portal on Education in Nepal
२४ जेष्ठ २०७७, शनिबार शंकर अधिकारी
ऐनमै नतिजा प्रकाशित हुनसाथ असफल शिक्षकहरु स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था छ । महासंघको अहिलेको निर्णय कानूनको बर्खिलाप भएन र ?
महासंघ राज्यको एउटा अंग पनि हो । यो अहिले विकास र समृद्धिको योजनामा हिडेको छ । हामीले हाम्रा तमाम् सदस्यहरुलाई पनि समयसापेक्ष रुपमा अपडेट हुनुपर्छ भनेका छौं । विज्ञान र प्रविधिको विकास, एकाधिकार पुँजीवादी वजारलाई शिक्षा छाड्ने प्रवृत्तिले व्यापक प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । अब, शिक्षकले शिक्षकसँग मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेर पुग्दैन । यसले यन्त्र मानव, रोवटहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति छ । शिक्षण विधि र शिक्षण पद्धतिहरुमा डिजिटल एरा शुरु भइसकेको अवस्था छ विश्व शैक्षिक आन्दोलनमा । यस्तो अवस्थामा पुरानै शिक्षकहरुलाई दोहर्याउनुपर्छ । शिक्षा धारशाही बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता किमार्थ होइन । संविधानको भाग ३को धारा ३४ ले दिएको ट्रेडयुनियन अधिकारको न्यूनतम अधिकार प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने नै हो । आइएलओ कन्भेक्सन १९१९ ले समेत एउटा श्रमिक ६ महिनापछि स्थायी बन्ने अधिकार सुरक्षित गरेको छ । राहत, बालविकास, २०७२ असोज २ पछिका छुट करार शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भनेका हौं । स्वत्तः स्थायी भनेका छैनौं ।
शिक्षक आयोगको नियमावली संशोधन गरेर पनि गर्न सकिन्छ । बरु गुणस्तरलाई सम्झौता नगरौं । ४० ल्याएर उत्तीर्ण हुने व्यवस्थालाई ५०/६० बनाउन सकिन्छ । उत्कृष्ट शिक्षकहरु नै आउन् । विगतमा हामीले ट्रेडयुनियन आन्दोलनमा एउटा परम्परा कायम गर्यौं । २०४८ देखि थुप्रौचोटि कार्यरत शिक्षकहरुले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने मौका पाए । राहत शिक्षक पनि २०६० सालदेखि नियुक्ति भएका छन् । बाल शिक्षिका झन् २०५५/०५६ देखि नियुक्ति भएका छन् । २०७२ असो १ गते नियुक्ति पाएको एउटा अस्थायी शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पायो । उही विधि र पद्धतिबाट २०६० सालमै नियुक्त भएका राहतले अवसर नपाउने कुरा भएन । उत्पीडनमा परेका बाल शिक्षिका जो ६ हजार तलवभत्ता खान्छन् र २०५५ देखि सेवा गरिरहेका छन् । उनीहरुले अवसर नपाउने भन्ने कुरा न्यायसंगत हुन सक्दैन । बरु त्यसलाई स्तरीकरण गरौं । मानंकहरुलाई विशिष्टिकृत गरौं । आयोगको नियमावली सुधारौं । ४० ल्याएर उत्तीर्ण हुने व्यवस्थालाई ५० या ६० बनाऔं । राज्यको विगतको विकृतबाट निस्केको समस्या समाधान होस् भन्ने नै महासंघको मान्यता हो । उमावि शिक्षक, राहत, बालविकास, २०७२ पछिका छुटकरार र विद्यालय कर्मचारी गरी सवालाखका लागि अन्तिमपटक आन्तरिक विज्ञापन गरौं । स्तरिय शिक्षककर्मचारी आउन बाँकीलाई सुविधा सहित बिदा गरौं । अयोग्य र असक्षमलाई स्थायी गरी देशलाई १० वर्ष पछाडि धकेल्ने महासंघको ध्येय होइन ।
अहिले पनि कुल शिक्षा बजेटको ६०/७० प्रतिशत शिक्षक तलबमै खर्च हुन्छ । अब २० प्रतिशत बजेट पुग्दा पनि तलबमै बढी खर्च गरे अन्य शैक्षिक सुधार कसरी हुन्छ ?
संघीय शिक्षा ऐन आउनमा भएको ढिलाइ प्रति शिक्षक महासंघको धारणा के छ ?
२०७५ चैत्र ७ गते २०:०६मा प्रकाशित